No. 2148, Saturday, June 8, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2148, Saturday, June 8, 2019
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၆ ရက် (စနေ၊ ဇွန် ၈၊ ၂၀၁၉)
အကျဉ်းထောင်တွေထဲကတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုသူ ၁၀၀ မှာ ၅၄ ဦးနှုန်းအောင်မြင်
ဒီနေ့ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ရာမှာ အကျဉ်းထောင်တွေကနေ ဖြေ ဆိုသူ တွေရဲ့အောင်ချက် ဟာ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတယ်လို့ အကျဉ်းဦးစီးဌာနရဲ့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုးဦးမင်းထွန်းစိုးဆီက သိရပါတယ်။
သင်ရိုးမှ ပယ်ဖျက်သည့်ကိစ္စများ ပေ့ါပေါ့ဆဆမလုပ်ရန် သမ္မတရုံးသတိပေး
မယ်ခွေ၏ ‘လက် ဆောင်’ ကဗျာကို ယခုပညာသင် နှစ်ကစတင်ကာ အဋ္ဌမတန်းမြန် မာစာသင်ရိုး ညွှန်းတမ်းမှပယ် ဖျက်ရာတွင် ခိုင်မာသောသုတေ သနပြုဆောင်ရွက်မှု မဟုတ်သဖြင့် စစ်တမ်းကောက်ယူရန်နှင့် ပေါ့ပေါ့ဆဆမလုပ်ရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အကြောင်းကြားထားသည်ဟု သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးကပြောသည်။
မစိမ့်ထက်သေဆုံးမှုဖြင့် တောင်တက်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေ
ဖန်ဂရန်ရာဇီရေခဲ တောင်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျသေဆုံးခဲ့ သည့် မစိမ့်ထက်ဖြစ်စဉ်တွင် တောင်တက်ရာ၌ ပါဝင်သည့် The Summiter တောင်တက်အ ဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို ဖမ်း ဆီးစစ်ဆေးနေသည်ဟု ပူတာအို မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးသန်းဦး ကပြောသည်။
ဦးဝီရသူသွားလာတတ်သည့် နေရာများတွင် စောင့်ကြည့်စုံစမ်းနေဟု သမ္မတရုံးပြော
၀ရမ်းထုတ်ခံထား ရသည့် ဦးဝီရသူသွားလာတတ် သည့်နေရာများသို့ စောင့်ကြည့် ရှာဖွေစုံစမ်းနေပြီး ၎င်းလာရောက် အဖမ်းခံခြင်းရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိ သည်ဖြစ်စေတရားရုံး လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက ပြောသည်။
မိုးကုတ်တွင် မှိုအဆိပ်သင့်၍ သားအဖသုံးဦးသေဆုံး
မိုးကုတ်မြို့နယ်မှ လီဆူ တိုင်းရင်းသားများနေထိုင်သော ရွာတစ်ရွာတွင် တောအတွင်းရှိ အမျိုးအမည်မသိသော မှိုစားမိရာ မှ ဒေသခံသားအဖသုံးဦး သေဆုံး ခဲ့သည်။
အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်မှ လက်ထပ်ထိမ်းမြားရမည့် ဥပဒေကြမ်းပြဋ္ဌာန်းချက်အတည်ပြု
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့သည် ‘အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်မှ လက်ထပ်ထိမ်းမြား ရမည်’ ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသော ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင် ရာ ဥပဒေကြမ်းပါ အချက်ကို ဇွန်လ ၇ ရက် ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်က မဲခွဲဆုံးဖြတ် အတည်ပြုသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ရလဒ်နှင့် ရမှတ်ကို သံသယရှိပါက ပြန်စစ်ပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အအောင်၊ အရှုံးနှင့်ရမှတ်ကိုသံသယရှိပါက အဖြေလွှာ ပြန်စစ်ပေးရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမိုးမြင့် ကျော်က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရုတ် ၏ BRI (ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမစီမံ ကိန်း)အရ တင်ပြလာသည့်စီမံ ကိန်း ၃၈ ခုအနက် ကိုးခုကိုသာ မြန်မာအစိုးရက ခွင့်ပြုထား ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်ဦးစခင်ဇော်လင်းက ပြော သည်။
သာသနာရေးနှင့် ယဉ် ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကိုသည် သံ ဃာများအရေး ဝင်ရောက်စွက် ဖက်နေပြီး ဖိအားများကို မလွန် ဆန်နိုင်ပါက အလုပ်မှနုတ်ထွက် ရန် ဦးဝီရသူက တောင်းဆိုသည်။ နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက် စေမှုပုဒ်မဖြင့် တရားစွဲဆိုခံရမှု ကြောင့် ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေ သော ဦးဝီရသူသည် ဇွန်လ ၆ ရက်တွင် VK လူမှုကွန်ရက်စာ မျက်နှာမှ တစ်ဆင့် အထက်ပါအ တိုင်း ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
ပါတီသစ်ထောင်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းခြင်း ယခုနှစ်ကုန် နောက်ဆုံးထားလျှောက်ရမည်
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကို အချိန် မီဆောင်ရွက်နိုင်ရေး နိုင်ငံရေး ပါတီသစ်တည်ထောင်လိုသူများ အနေဖြင့် ယခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက် ထားရန် ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကြေညာ သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် အသက် (၂) နှစ်အောက်ကလေးများ ထောက်ပံ့ရေး ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ချေးငွေယူရန် ဆုံးဖြတ်
ပြည်ကြီးတံခွန် ရေပေးဝေရေးစီမံကိန်း ဆောင် ရွက်ရန်နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်အ သက် (၂) နှစ်အောက် ကလေး ငယ်များအား ထောက်ပံ့ကြေးပေး ရန် ချေးယူမည့်ချေးငွေကို ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်က မဲခွဲဆုံး ဖြတ်အတည်ပြုခဲ့သည်။
ပြင်သစ်အိုးပင်းအမျိုးသမီး ဗိုလ်လုပွဲတွင် ဗွန်ဒရူဆိုဗာနှင့် ဘာတီတို့ ယနေ့ယှဉ်ပြိုင်မည်
၂၀၁၉ ပြင်သစ်အိုးပင်းအ မျိုးသမီး ဗိုလ်လုပွဲတွင် ချက် တင်း နစ်မယ် မာကီတာဗွန်ဒရူဆိုဗာ သည် သြစတြေးလျမှ ပြိုင်ပွဲဝင်အ ဆင့် (၈) အက်ရှ်လိတ်ဘာတီနှင့် ယနေ့ည ၇ နာရီခွဲ၌ ရင်ဆိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဂျိုဟန်နာကွန်တာ၏ ၁၉၇၇ နောက်ပိုင်း ဂရင်းဆလမ်ဗိုလ်လု ပွဲသို့ တက်လှမ်းနိုင်သည့် ပထမ ဆုံးဗြိတိန်အမျိုးသမီးဖြစ်လာရန် မျှော်လင့်ချက်သည် ချက်ဆယ် ကျော်သက် မာကီတာဗွန်ဒရူဆို ဗာကို ဆီမီးဖိုင်နယ်တွင် ရှုံးနိမ့်မှု နှင့်အတူ အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ဟာဇက်ကို ပေါင် ၈၈ သန်းဖြင့် ရီးရဲလ်က ကမ်းလှမ်းမှု ချယ်လ်ဆီးလက်ခံ
ဘယ်လ်ဂျီယံတိုက်စစ်မှူး ဟာဇက်ကို ခေါ်ယူရန်ရီးရဲလ်က ပေါင် ၈၈ သန်းဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုချယ်လ်ဆီးက လက်ခံခဲ့သည်။ သို့သော် ဟာဇက်အတွက် ရီးရဲလ်ကစုစုပေါင်း ပေါင် ၁၂၄ သန်းနှင့် အပိုကြေးပေးရနိုင်သည်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းညွှန်ကြားရေးမှူး မာရီနာဂရန်နော့ဗ်စကီယာနှင့် ရီးရဲလ်အသင်း အမှုဆောင်အရာ ရှိချုပ် ဂျိုးစ်အန်ဂျယ်ဆန်းချက်စ်တို့ တနင်္လာနေ့က လန်ဒန်မြို့တွင် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးပြီးနောက် နှစ်သင်းကြား ဟာဇက်၏ ပြောင်းရွှေ့ကြေးကို သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။
.ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှူးနေမာ မည်မျှကြာကြာ အနားယူရမည်ကို ဆုံး ဖြတ်ရန် ပီအက်စ်ဂျီဆေးအဖွဲ့က ၎င်း၏ဒဏ်ရာကို လာမည့်သုံးရက်အ တွင်း စစ်ဆေးမည်ဟု ပီအက်စ်ဂျီကပြောကြားသည်။ ထိုအတောအ တွင်း နေမာသည် မုဒိမ်းမှုစွပ်စွဲချက်များ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် ရီယို ဒီဂျနေးရိုးမြို့ ရဲစခန်းသို့ သွားရောက်ထွက်ဆိုချက်ပေးခဲ့သည်။
ကန်တီဒူးဒဏ်ရာကြောင့် ပြင်သစ်၏ ယူရိုခြေစစ်ပွဲများနှင့် လွဲချော်
ချယ်လ်ဆီးကွင်းလယ်လူ အန်ဂိုလိုကန်တီသည် ဒူးဒဏ်ရာ ကြောင့် ယနေ့ည တူရကီနှင့်ပွဲအ ပါအဝင် ရှေ့လာမည့်ပြင်သစ် ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲများကို လွဲ ချော်မည်ဟု ပြင်သစ်ဘောလုံးအ ဖွဲ့ချုပ်က ပြောကြားသည်။
အပြောင်းအရွှေ့ ပိတ်ပင်ခံရမှုကို ချယ်လ်ဆီးက အားကစားခုံသမာဓိ တရားရုံးသို့ အယူခံဝင်
ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (ဖီဖာ) က အပြောင်းအရွှေ့ကာလ နှစ်ခု ပိတ်ပင်ခဲ့မှုအပေါ် ချယ်လ် ဆီးက အားကစားဆိုင်ရာ ခုံသမာ ဓိတရားရုံး (Cas) သို့ အယူခံဝင်ခဲ့ သည်။
နယ်သာလန်နှင့်ရှုံးပွဲမှ သင်ခန်းစာယူရမည်ဟု အင်္ဂလန်နည်းပြဆောက်သ်ဂိတ်ပြောကြား
အင်္ဂလန်ကိုနောက်မှ လိုက်ကစားကာ ၃-၁ ဂိုးဖြင့်အ နိုင်ရပြီး နယ်သာလန်က နေးရှင်း လိဂ်ဗိုလ်လုပွဲသို့ တက်ရောက် သွားစဉ် အင်္ဂလန်နည်းပြ ဆောက်သ်ဂိတ်က ၎င်း၏အသင်း အနေဖြင့် အမှားများသော စွမ်း ဆောင်ရည်မှ သင်ခန်းစာယူမည် ဟု ကတိပြုသည်။
အလွတ်တန်း ဖူဆယ်ဖလားပြိုင်ပွဲ (မန္တလေး)ကို အသင်း ၆၀ ကျော်ဖြင့် ကျင်းပမည်
အလွတ်တန်း ဖူဆယ်ဖလားပြိုင်ပွဲ (မန္တလေး) ကို ၆၄ သင်းဖြင့် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖူဆယ်လိဂ်ကော်မတီက ထုတ်ပြန်သည်။
မကာအို ဖိတ်ခေါ် ရိုးရာနဂါးလှေပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်း ငွေတံဆိပ် ရရှိ
မကာအိုနိုင်ငံ၌ ကျင်းပသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖိတ်ခေါ် ရိုးရာနဂါးလှေပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အမျိုးသမီး လှေလှော်အသင်းက ငွေတံဆိပ် ဆု ရရှိခဲ့သည်။
မြောင်တောင်အသင်းမှ ထွက်ခွာရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း အောင်သူ ဆို
ထိုင်းလိဂ်-၁ ကလပ် မြောင်တောင်ယူနိုက်တက်တွင် ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့် မရသဖြင့် အသင်းမှ ထွက်ခွာရန်ဆန္ဒရှိကြောင်း မြန်မာ့လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူးအောင်သူက ပြောသည်။
ကချင်တစ်ကျော့ပြန်စစ်ပွဲ ရှစ်နှစ်ပြည့်ဆုတောင်းပွဲ မြစ်ကြီးနားတွင် ယနေ့ကျင်းပမည်
တပ်မတော်နှင့် ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(KIA) တို့အကြား တစ်ကျော့ပြန် စစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားမှု ရှစ်နှစ်ပြည့်ဆုတောင်း ပွဲကို မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ယနေ့ (ဇွန်လ ၈ရက်)ကစ၍ နှစ်ရက် ကြာပြုလုပ်မည်ဟု ကချင်လူငယ် တာဝန်ခံများက ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေး ပါတီ (SSPP/SSA) တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်သည်ဆိုကာ လား​ရှိုးမြို့ပေါ်သုိ့ ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်နေသော မန့်ပြိန်းကျေး ရွာဒေသခံများသည် ကျေးရွာအ တွင်း တပ်မတော်လုံခြုံရေးယူပြီး နောက်နေရပ်သို့ ပြန်သွားပြီဖြစ် သည်။
လွိုင်ကော်ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တု အုတ်ခုံတည်ဆောက်ရန် လွှတ်တော်သို့ အသိမပေးဘဲ ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ကျော်သုံးစွဲမှု အဂတိဟုဆို
ကယားပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့က ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုထားရှိမည့် အုတ်ခုံတည်ဆောက်ခြင်းအ တွက် ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး ရန်ပုံငွေ ကျပ်သိန်းတစ် ထောင်ကျော်ကို လွှတ်တော်သို့ အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ သုံးစွဲခြင်း သည် အာဏာအလွဲသုံးမှု၊ အဂတိလိုက်စားမှုဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ် ရုပ်တု ကန့်ကွက်ရာတွင် ပါဝင် သည့် လူငယ်များက ယမန်နေ့တွင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည်။
အရပ်သားခြောက်ဦး သေဆုံးခဲ့သည့် စပါးထားရွာသို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် သံဃာအချို့ သွားရောက်လေ့လာ
လက်နက်ကြီးကျည် ကျရောက်ပေါက်ကွဲခြင်း ကြောင့် အရပ်သားခြောက်ဦး သေဆုံးခဲ့သော မင်းပြားမြို့နယ် စပါး ထားကျေးရွာသို့ ယင်းမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်နှင့် မြို့ပေါ်ရှိ သံဃာအချို့သည် ဇွန်လ ၆ ရက်က သွားရောက်လေ့လာခဲ့သည်။
တောင်န၀င်းဆည် ရေသိုလှောင်နိုင်သော ပမာဏ၏ ထက်ဝက်သာ သိုလှောင်ရန် ဆုံးဖြတ်
တမံအက်ကြောင်းဖြစ် ပေါ်ပြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော တောင်န၀င်းဆည် နှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများ၏ စိုး ရိမ်မှုကို လျှော့ချနိုင်ရန် လာမည့် မိုးရာသီတွင် သိုလှောင်နိုင်သော ရေပမာဏ၏ ထက်ဝက်သာ သိုလှောင်ရန် ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအရင်းအမြစ် အသုံးချမှု စီမံခန့်
မောင်တောတွင် ကျပ်သိန်းငါးထောင်ကျော် တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွ ဆေးပြားများ ဖမ်းမိ
မောင်တောမြို့တွင် ကျပ်သိန်း ၅,၆၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများနှင့် ဘင်္ဂါလီအမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဖမ်း ဆီးရမိခဲ့သည်။
ဘုတလင်မြို့နယ်၌ အစုအပြုံလိုက်သေဆုံးသည့်ကြွက်များတွင် လူကိုကူးစက်နိုင်သည့် ပလိပ်ရောဂါပိုး မတွေ့
မုံရွာခရိုင် ဘုတလင်မြို့နယ် မောင်းထောင်ကျေးရွာတွင် အစု လိုက်အပြုံလိုက် သေဆုံးသည့် ကြွက်များ၌ လူကို ကူးစက်နိုင် သည့် ပလိပ်ရောဂါပိုး မတွေ့ ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ကူးစက် ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး အဖွဲ့ခေါင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ပုံတူပန်းချီပြပွဲ မုံရွာ၌ ကျင်းပမည်
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၇၄)နှစ်မြောက် မွေးနေ့အထိမ်း အမှတ်ပုံတူပန်းချီပြပွဲကို မုံရွာမြို့ တွင် ပထမအကြိမ်ကျင်းပမည်ဖြစ် ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံပန်းချီပန်းပု အစည်းအရုံး(မုံရွာမြို့နယ်)ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖေခင်ဦးက ပြောသည်။
တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာများဆောက်ရန် အစိုးရပိုင်မြေယာများ ရှားပါးနေကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြ
တပ်မတော်နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွှယ်နေသူများနှင့် ပုဂ္ဂလိက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အကြီးစားမြေယာအစိတ်အပိုင်းများ လွှဲပြောင်းခဲ့သဖြင့်တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာများ တည်ဆောက်ရန် အစိုးရပိုင်မြေယာများ ရှားပါးနေကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ မြန်မာ နိုင်ငံမြို့ပြဖြစ်ထွန်းမှု အစီရင်
တရုတ်၏ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမစီမံကိန်း အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လေ့လာသူအဖြစ် မြန်မာပါဝင်မည်
တရုတ်နိုင်ငံ ဦး ဆောင်သည့် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ စီမံကိန်း၏ အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှု ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းစနစ်(Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism - BRITACOM)တည်ထောင်သည့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာတွင် မြန်မာနိုင်ငံက လေ့လာသူအ